Banyere Anyị - SHENZHOU CITY YAAO PUMP INDUSTRY CO., LTD.
SHENZHOU CITY YAAO mgbapụta ụlọ ọrụ CO., LTD.
Shenzhou Yaao mgbapụta Industry Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke elu-edu apịtị mgbapụta akụkụ ahụ mapụtara, imikpu mgbapụta akụkụ ahụ mapụtara, na hydrocyclone linings, tụnyere R & D, mmepụta na ahịa. Ọ nwere ihe karịrị afọ 20 nke mmepụta ahụmahụ. Mbọ iji nye akwa na-eguzogide ọgwụ na ngwaahịa dị elu nke roba maka ndị ọrụ ụwa.
Anyị ụlọ ọrụ slurry mgbapụta roba akụkụ nwere ike ịbụ kpamkpam kennyeghari na ụwa ma ama ụdị 'slurry mgbapụta roba akụkụ.
Natural roba (nke si Malaysia, Singapore & Thafiand), R26, R33, R08, S01 (EPDM), S10 (NBR), S12 (Nitrile), S21 (Bromobutyl), S31 (Hypalon), S42 (Neoprene).
Foto osisi （Anyị nwere ngwaahịa zuru ezu nke akụkụ ahụ mapụtara）
Akwa mma roba ebu
Anyị bụ ndị ibe gị tụkwasịrị obi maka ntụkwasị obi, azịza metụtara nsogbu. Anyị ozi bụ budata dịkwuo gị arụmọrụ na-eri irè. Ọrụ anyị nwere ike inyere ndị ahịa belata ụgwọ ọrụ ha, hazie mmezi ma belata mbadamba. Nkwado anyị na ndị ahịa na-abịarukwu nso, anyị na-agba mbọ ịnyekwu ọrụ iji meziwanye ọrụ na uru.
YAAO na-agbasi mbọ ike ịbụ onye ndu na-enweghị mgbagha na ụlọ ọrụ niile anyị na-ejere ozi. Ewubere usoro mmepe anyị na arụmọrụ kacha mma, ngwaahịa na njikwa injinia yana ọrụ ndị ahịa pụrụ iche.
Na ọtụtụ afọ nke ụlọ ọrụ ahụmahụ na ngwa ihe ọmụma n'okpuru anyị na ngwaahịa, anyị ọkachamara na-arụ ọrụ na onye ọ bụla ahịa na-ekpebi ihe kasị mma ngwọta. Anyị na-eme ka teknụzụ anyị mezuo ihe ị chọrọ wee hụ na mkpa ọrụ gị na-akwado maka arụmọrụ kachasị na arụmọrụ na-enweghị nsogbu.